Ụgbọ elu Avianca na-ahụ ụbọchị ọhụrụ: Nzọụkwụ na-apụ na enweghị ego
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu Avianca na-ahụ ụbọchị ọhụrụ: Nzọụkwụ na-apụ na enweghị ego
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi Colombia • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Transportation
Ụgbọ elu nke Avianca
Mgbe ịbanye n'Isi nke 11 na Mee 10, 2020, ụlọ ọrụ ahụ nwetara nkwekọrịta nke ọma na ndị na-akwụ ụgwọ ya, welitere ntinye ego ohuru nke ijeri $1.7, wee nweta nkwado maka atụmatụ nhazigharị ya, na-apụta na akwụkwọ nguzozi siri ike, belata ụgwọ dị ukwuu, yana ihe karịrị ijeri $1 na ego.
Avianca emezigharịla usoro azụmaahịa ya ka ọ bụrụ nke ọma karịa nke ọma, na-ekwughachi nkwa ya n'inye ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na nke oge, na-ejikọta atụmatụ bara uru nke gụnyere àgwà kacha mma nke ụgbọ elu dị ọnụ ala, ebe ọ na-ejigide ndị isi ihe dị iche iche na-enye ohere ka ọ bụrụ nke kachasị adaba. njem ọzọ maka ọtụtụ nde ndị njem na Latin America na ụwa.
N'ile anya n'ihu, Avianca ga-anọgide na-ewusi echiche ya ike, na-edozi ngwaahịa na ọrụ ya na mkpa nke ndị ahịa ya.
Dịka atụmatụ nhazigharị nke akwadoro, ndị nwe oke ọhụrụ ga-etinye ego na Avianca Group International Limited, ụlọ ọrụ ejidere ọhụrụ, nke a ga-ebi na United Kingdom ma mee ka itinye ego nke otu ahụ na ndị enyemaka ya niile (gụnyere Aerovias del Continente Americano). Enyemaka Colombian, yana TACA International, ọrụ Central America ya). Ụlọ ọrụ ejidere mbụ, Avianca Holdings nọ na Panama.